I-Semalt inikela ngeendlela ezi-3 eziphambili ze-Web Scraping You Must Know About
I-Web scraping, eyaziwa nangokuvuna iwebhu kunye nokukhutshwa kwedatha, yinto yokukhanda ulwazi kwi-net. I-10 ye-web scraping ifumaneka kwi-Intanethi ngeProtocol yokuTshintshiselwa kwe-Hypertext, okanye kwi-browser ezihlukeneyo zewebhu.Ulwazi oluthe ngqo luqokelelwe kwaye lukopishwe. Kugcinwa kwisiseko esisezantsi okanye ukhutshwe kwi diski yakho. Indlela elula yokufumana idatha kwi-site ukuyikhuphela ngesandla, kodwa ungasebenzisa isofthiwe ye-web scraping ukuze uyenze umsebenzi wakho. Ukuba umxholo usasazeka kumawaka ewebhusayithi okanye kumaphepha ewebhu, kufuneka usebenzise ukungenisa. Io kunye neKimono Labs ukufumana kunye nokuhlela idatha njengoko ziyimfuno zakho. Ukuba uhambo lwakho lomsebenzi lufanelekile kwaye luyinkimbinkimbi, ngoko unako ukusebenzisa nayiphi na le ndlela kwiiprojekthi zakho.
Indlela ye-1: I-DIY:
Kukho inamba enkulu ye-intanethi ye-web-scraping technologies. Kwindlela ye-DIY, uya kuqesha iqela labaphuhlisi kunye nabaprogram ukuba ufumane umsebenzi wakho. Abayi kuthi kuphela bahlule idatha egameni lakho kodwa nabo baya kuba neefayile zokulondoloza. Le ndlela ifanelekileyo kumashishini kunye namashishini adumile. Indlela ye-DIY ayikwazi ukuhambelana nama-freelancers kunye nokuqalisa ngokubakho ngenxa yeendleko zayo eziphezulu. Ukuba isetyenziselwa ukukhangela i-web techniques, abaprogram okanye abaphuhlisi bakho banokuhlawula imali ephezulu kunamaxabiso athile. Nangona kunjalo, indlela ye-DIY iqinisekisa ukubonelelwa kwedatha esemgangathweni.
Indlela ye-2: Izixhobo zokucoca iWeb kunye neenkonzo:
Ngokuqhelekileyo, abantu basebenzisa iinkonzo ze-web scraping kunye nezixhobo ukuze benze imisebenzi yabo yenziwe. I-Octoparse, i-Kimono, Ingenisa. Io, kunye nezinye izixhobo ezifanayo ziphunyezwa kwizinga elincinci nelikhulu. Amashishini kunye ne-webmasters baze badonse idatha kwiiwebhusayithi ngesandla, kodwa oku kuyenzeka ukuba banayo iiprogram ezinkulu kunye neenkcukacha zokubhala. I-Web Scraper, isandiso se-Chrome, isetyenziswe ngokubanzi ukwakha i-sitemaps kwaye ichaze izinto ezahlukeneyo zesayithi. Ngenye, idatha ilandelwa njengeifayile ze-JSON okanye ze-CSV. Unokwakha isofthiwe ye-web scraping okanye usebenzise ithuluzi elisele likhona. Qinisekisa ukuba inkqubo oyisebenzisayo ingagqithisi kuphela indawo yakho, kodwa iphinda ikhuphe amakhasi akho ewebhu. Iinkampani ezifana ne-Amazon AWS kunye ne-Google zinikeza amathuluzi okutsala , iinkonzo kunye nolwazi oluntu ngaphandle kweendleko.
Indlela ye-3: I-Data-njenge-Service (DaaS):
Kwiimeko ukuchithwa kwedatha , idatha-njengenkonzo-yinkqubo evumela abathengi ukuba bamise ukutya kwedatha yesintu. Uninzi lwemibutho yeevenkile yatshintshisa idatha kwi-repository ene-self-contained. Inzuzo yale ndlela kubanini-shishini kunye nabahlalutyi beenkcukacha kukuba iwazisa kwiindlela ezintsha zokucoca zewebhu; Kwakhona kunceda ukuvelisa ezininzi izikhokelo. Baya kuba nako ukukhetha i-scrapers ethembekileyo, funda amabali ahambayo, kwaye ubone ngedatha ukusabalalisa ngaphandle kweyodwa ingxaki.
IWebhu yeFayili yeSofthiwe yokuCoca
1. Uipath - Ithuluzi eligqibeleleyo lwabaprogram kwaye linokugqithisa imingeni ye-intanethi yenkcazo yeedatha, ezifana nokuhamba kwiphepha, ukumba i-flash, kunye nokukhwa kweefayili ze-PDF.
2. Ngenisa. Io - Esi sixhobo siyaziwa ngokuba ngumsebenzisi-friendly interface kwaye sichaza idatha yakho ngexesha langempela. Unokufumana iziphumo kwiifom ze-CSV ne-Excel.
3. I-Kimono Labs - i-API idalwe kumaphepha ewebhu yomnqweno wakho, kwaye ingcaciso ingachongwa kwi-newsfeeds kunye ne-stock markets Source .